काठमाडौ : प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको वालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकर’णमा छान’विनमा परेका काँग्रेस नेता एवं पुर्व मन्त्री बिजय कुमार गच्छेदारको सबै सम्पत्ति रोक्का भएको छ ।
तर सोही का’ण्डमा संलग्न नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले पुर’स्कृत गर्दै अर्थमन्त्री नै बनाउनुभएको छ । बालुटारको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराएको आरोपमा गच्छेदारलाई मु’द्दा चलाइएको हो।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेला मन्त्री परिषदको बैठकले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्क्तिका नाममा दर्ता गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रअनुभएका गच्छेदारले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आफूले ललिता निवास जाने बाटो बनाउन प्रस्ताव गर्दै मन्त्री परिषदमा फाइल पेश गरेकोे र माधव नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट उक्त निर्णय भएको गच्छदारले नै बताउँदै आउनुभएको छ ।
मैले निर्देशन माने मलाई कारवाही हुने ? अनि मलाई निर्देशन दिने, काम लगाउनेलाई केही नहुने यो कस्तो न्याय हो ? म माथि राजनैतिक प्रतिशोध साधिएको छ । मलाई अन्याय भएको छ ।‘ गच्छेदारले भन्नुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धी’करण तथा अनुस’न्धान विभागले काठमाडौं, सुनसरी र मोरङमा रहेको गच्छेदारको सम्पत्ति रोक्का गरेको जनाएको छ । अन्य मुछिएका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति पनि छानविन गरीरहेको जनाईएको छ । उक्त प्र’करणमा संलग्न अ’ख्तियार दु’रुपयोग अनु’सन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको यसअघि नै विभागले सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गरीसकेको छ ।
ललिता निवास प्र’करणमा पूर्व उपप्रधान तथा तत्कालीन भौतिक निर्माणमन्त्री गच्छदार, पूर्व मन्त्रीद्वय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, अख्ति’यारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वमन्त्री एवं सचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीसहित ६ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलगायत १७५ जनाविरु’द्ध अख्तियारले चलाएको मुद्दा विशेष अ’दालतमा विचाराधीन छ ।’
०७६ माघ २२ मा भ्रष्टाचार आरोपमा ११० जनालाई मुद्दा दायर गरिएको थियो भने ६५ जनावि’रुद्ध सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका प्रतिवादी बनाएर मु’द्दा चलाइएको छ ।
यसै प्रकरणमा संलग्न भई सरकारी जग्गा ब्यक्तिको बनाएर कमिशनमा जग्गा लिने र न्यून राजश्व तिरेर खरिद गरेको देखाउने काम बिष्णु पौडेलबाट भएको थियो । जग्गा कीर्ते काइते काण्डका मतियार, जग्गा किन्ने कार्यमा संलग्न नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेल बि,रुद्ध पनि मु’द्धा दाय’र हुनु पर्ने चर्को आवाज उठेको थियो ।
पौडेलका छोराको नाममा आठ आना जग्गा खरीद भएको थियो । तर जग्गा फिर्ता गरेकाले भनेर उनलाई मु’द्धा चलाईएन । हाल विष्णु पौडेल ओलीबाट पुरस्कृत भएर अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ ।
Previous आधा दर्जन कारण देखाउँदै बाबुरामले सुरू गरे ओली सरकार हटाउने ह्यासट्याग…हेर्नुहोस् ।
Next फेरि एक्कासी ओलीसँग किन यसरी रिसाए बामदेव ? लगाए यस्तो ग’म्भीर आ’रोप, अब के गर्लान ओली ?